Fikarohana momba ny firaisana Raharaha fanalefahana an'i Thomas Edison | Elon Musk miaraka amin'ny Grianika Musicista ho Mina Edison Reborn - Fikarohana Reincarnation
After seeing Elon Musk tao amin'ny fahitalavitra, izay nandray anjara tamin'ny fananganana Tesla Motors, PayPal ary SpaceX, dia nanontany tena aho hoe iza no mety ho nahatonga azy ho tafiditra indray. Tamin'ny famakiana ny tantaram-piainany, Thomas Edison mitsambikina ao an-tsaiko. Edison dia nantsoina hoe "Mpanjakan'ny Menlo Park" (New Jersey), raha i Musk kosa dia nantsoina hoe iray amin'ny milina "Rocklin" an'i SpaceX ary nilaza tamin'ireo nahazo diplaoma tamin'ny Caltech izy ireo fa izy ireo dia "Zava-tsarobidin'ny taonjato 21".
Nikola Tesla niasa tao amin'ny laboratoara Edison talohan'ny naha-mpanohitra azy ireo tamin'ny resabe raha toa ny AC na DC amin'izao fotoana izao mahomby kokoa amin'ny famindrana herinaratra. Toa nanamboatra an'ity fifandraisana ity i Musk tamin'ny alàlan'ny fanondroana ny fiarany elektrika taorian'ny Tesla. Edison dia mpamorona iray voalaza fa namorona laboratoara fikarohana indostrialy voalohany ary Elon Musk dia nanaraka làlana iray. Hitako fa mampitolagaga ny fitoviana amin'ny tarehy ary nanamafy i Ahtun Re fa i Elon Musk dia ny fanambadiana indray ao amin'i Thomas Edison.
Tamin'ny taona 2020, nanana zanaka i Elon Musk sy ilay namany, ilay mpitendry zavamaneno. Ny heloka bevava dia fantatra fa ny fahaterahan'i Mina Edison, vadin'i Thomas. Elon sy Graves dia nanome ny zanak'izy ireo anarana teknolojia, X Æ A-12.
Tamin'ny collarolate mahaliana iray dia nomen'i Thomas Edison zanaka roa lahy tamin'ny anaram-panambadiana taloha ny anarana nick "Dash" sy "Dot," ho an'ny Morse Code, teknolojia fifandraisan-davitra tamin'ny andron'i Edison.
Raha hijery tranga toy ny reincarnation mitovitovy, azafady, alaivo:
Ny fiainana taloha dia nampiditra ny mpitondra ny siansa sy ny teknolojia
Fihetseham-batana ara-batana ao amin'ny vatana vaovao: Ny endriky ny tarehin'i Thomas Edison sy Elon Musk dia tena mitovy.
Ny fiainana taloha talenta: Thomas Edison dia mpamorona sy mpandraharaha manerantany izay nanova izao tontolo izao tamin'ny alalan'ny fampiasana indostrialy ny zavaboariny. Mitovy amin'izany koa i Elon Musk.
Fanavaozana ny fifandraisana amin'ny alalan'ny fanambadiana: Lehiben'ny mpikaroka sy mpiara-miasa amin'i Thomas Edison dia Charles Batchelor, izay miasa miaraka amin'i Edison ankehitriny Musk amin'ny endrik'i Steve Jurvetson.
Elon Musk dia nihaona indray tamin'ny Mina vadin'izy mivady taloha, tao amin'ny persona Grimes.
Fiovana amin'ny maha-olom-pirenena: Teraka tany Ohio, tany Etazonia, i Thomas Edison, fa i Elon Musk kosa teraka tany Afrika Atsimo.
Fiovana amin'ny finoana: Nandray anjara i Thomas Edison spiritisma ary nanandrana nanamboatra fitaovana elektronika izay azo ampiasaina amin'ny fifandraisana amin'ny fanahy. Mifanohitra amin'izany kosa, toa ny agnostika na ny tsy mino an'Andriamanitra i Elon Musk. Ny fanantenako fa ny porofon'ny fiverenana amin'ny maty ao amin'ny vatana vaovao, indrindra fa ny asa nataon'i Ian Stevenson, MD, ao amin'ny Oniversiten'i Virginie dia hamerina ny fahalianany amin'ny Instrumental Transcommunication.
Ny firaisam-po amin'ny fanambadiana ao amin'ny JP Morgan | Tim Draper
Ny fanamboarana an'i Carol Batchelor | Steve Jurvetson